आज ३० साउन तथा अगष्ट १४को राशिफल, श्रीकृष्णजन्माष्टमीको आस्थावान भक्तजनहरुमा शुभकामना – Complete Nepali News Portal
आज ३० साउन तथा अगष्ट १४को राशिफल, श्रीकृष्णजन्माष्टमीको आस्थावान भक्तजनहरुमा शुभकामना
August 13, 2017	1,285 Views
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल श्राबण ३० गते सोमबार इश्वी सन २०१७ अगस्त १४ तारीख भाद्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी १७ः४८ बजे सम्म पश्चात अष्टमी तिथी चन्दमा मेष राशिमा सूर्य दक्षीणायन बर्षा ऋतु, अष्टमीब्रत ,श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत (मोहरात्रि ) मन्वादि – ज्यो. प. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर ।
मान प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग रहेको छ । आफ्नो कुसलताले गर्दा आम्दानिको क्षेत्र सबल रहने छ । आफन्त जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पुग्नेछ । प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला।
मानसीक चन्चलताले सताउन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । अन्य ब्यक्तिको पूर्ण बिश्वास नगर्नु होला ।
बोलिका कारण दाम्पत्य शुखमा केहि खटपट रहनसक्छ । अरुको कुरामा बिशेष ध्यान नदिनु होला । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । प्रतिस्पर्दाजन्य कार्यमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ बिशेष ध्यान दिनु होला ।
आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि आई पर्न सक्नेछ । साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
माता श्रीमनकामनाले सबै जयकल्याण गरुन, शनिबार ६ माघ/जनवरी २० को राशिफल
माता पाथीभरादेवीले सबैको मनोरथ पुरा गरुन, शुक्रबार माघ ५ /जनवरी १९को राशिफल